သင့်ရဲ့ PC မှာ, XBOX 360 EMULATOR DOWNLOAD - WINDOWS ကို - 2019
သင့်ရဲ့ PC မှာ, Xbox 360 emulator
တစ်ခါတစ်ရံတွင် Android OS ဗားရှင်း 7.6, မက်ဆေ့ခ်ျကို "ရှာဖွေတွေ့ရှိပြသမှု" နဲ့စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကာလအတွင်း။ ကျနော်တို့ကဒီအမှားကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းများ၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏အကြောင်းရင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သင့်အားပူဇော်လော့။
မှားယွင်းမှုတစ်ခု, ဒါပေမယ့်သတိပေးမဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာမက်ဆေ့ခ်ျကို "ရှာဖွေတွေ့ရှိပြသမှု" ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။ အမှန်မှာက Android အတွက် 6.0 Marshmallow နှင့်အတူစတင်, လုံခြုံရေး tools တွေကိုပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားထိပ်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ပြတင်းပေါက်ဖော်ပြရန်အချို့ application များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ (ဥပမာ YouTube ကို client ကို) အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိပါသည်။ Google ၏ developer များအလားတူအားနည်းချက်စဉ်းစား, ထိုသို့လိုအပ်သောဤအကြောင်းကိုသုံးစွဲသူများကိုသတိပေးတွေ့ပြီ။
သင်သည်အခြားပြတင်းပေါက်၏ထိပ်ပေါ်တွင် interface ကိုဖော်ပြရန်နိုင်စွမ်းရှိသည်အချို့ Third-party utilities သုံးနေစဉ်မည်သည့်အစီအစဉ်အတွက်ခွင့်ပြုချက်တင်ထားရန်ကြိုးစားသောအခါသတိပေးခြင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
Display ရဲ့များ၏အရောင်ချိန်ခွင်လျှာကိုပြောင်းလဲရန် Applications ကို - Twilight, f.lux နှင့်တူသော;
floating ခလုတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူအစီအစဉ် - သံတမနျ (Viber ကို, WhatsApp ကို Facebook က Messenger ကို), လူမှုကွန်ယက် (Facebook က, VK, Twitter ကို) ၏ clients များ,
အခြားရွေးချယ်စရာ blockers မျက်နှာပြင်;
တချို့က browser များ (Flynx, FliperLynk);
Method ကို 1: အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Mode ကို
ထိုပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကို Android လုံခြုံရေးပြသမှု၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းမှာတက်ကြွစွာ mode ကိုတားမြစ်သည်, ဒါကြောင့်သတိပေးပြသနေသည်။
ကျနော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှု mode မှာသွားပါ။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအပေါ်ကျိန်းဝပ်မည်မဟုတ်။
အသေးစိတ်: Android ပေါ်မှာက "ကို Safe Mode ကို" enable လုပ်ဖို့
သေချာသင့်ရဲ့ device ကိုလုံခြုံ mode မှာကြောင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်ချိန်ညှိမှုများ app ကိုသွားပါ။ ထိုအခါအလိုရှိသော resolution ကိုထုတ်ပေး - ဤအချိန်အဘယ်သူမျှမမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေါ်လာမပြုသင့်ပေ။
လိုအပ်သောထိန်းသိမ်းရေးအမှုကိုပြုတော်မူပြီးမှ, ပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ device ကို reboot ။
Method ကို 2: ခွင့်ပြုချက် settings ကို
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှဒုတိယလမ်း - ယာယီအခြားထိပ်အပေါ်ပြတင်းပေါက်ဖော်ပြရန် program တစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေကို disable ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဤခြေလှမ်းများလိုက်နာပါ။
သွားပါ "Settings" ကို နှင့်ကိုသွား "Applications ကို".
Samsung က devices များတွင်, Menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကို select "အထူးခွင့်ပြုချက်"။ ကို Huawei Device များတွင် - ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "နောက်ထပ်».
ညာဘက်ထိပ်မှာ "စင်ကြယ်သော" ကို Android နှင့်အတူ devices များတွင်ဂီယာတစ်ခုအိုင်ကွန်နှင့်အတူတစ်ခလုတ်ကိုဖွစျရမညျ, သငျသညျကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကို Huawei Device များတွင်, select လုပ်ပါ "အထူး Access ကို".
ကိရိယာပေါ်မှာက Samsung, ညာဘက်ထိပ်မှာသုံးစက်နှင့်အတူခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကို select "အထူးခွင့်ပြုချက်"။ tapnite အားဖြင့် "အဝတ်အချည်းစည်း» Android ပေါ်မှာ "အဆင့်မြင့် Settings" ကို.
ထို option ကိုရှာ "အခြားပြတင်းပေါက်၏ထိပ်ပေါ်မှာ Overlay ကို" ထိုသို့သို့သွားပါ။
ကျနော်တို့အသွင်အပြင်ပြဿနာအလားအလာသတင်းရင်းမြစ်များစာရင်းကိုရှိအထက်တပ်ဆင်လျှင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နောက်ထပ်လုပ်ရပ်တွေကိုဤအစီအစဉ်များအတွက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ disable ပါလိမ့်မယ်။
ဤအတဲ့ pop-ups ဖန်တီးခွင့်ပြုခဲ့ကြသည် applications များစာရင်းမှတဆင့် scroll, သူတို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ထို့နောက်နီးစပ် "Settings" ကို နှင့်အမှားအခွအေနေမျိုးပွားဖို့ကြိုးစားပါ။ မြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုမရှိတော့ပြသနေသည်။
ဤနည်းလမ်းကိုနည်းနည်းပိုပြီးခက်ခဲယခင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုံးဝနီးပါးအာမခံချက်ရလဒ်များကို။ ပြဿနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုစနစ်တစ်ခု application ဖြစ်ပါတယ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ဤနည်းလမ်းကိုမကူညီဘူး။
Method ကို 3: Disable လုပ်ထားဟာ့ဒ်ဝဲပြသမှု
ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်တွင်ချမှတ်ထားထိန်းချုပ်မှု - အန်းဒရွိုက်အတွက် developer Mode ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ features တွေတစ်အရေအတွက်, အရာတစျခုမှဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်အသုံးပြုသူပေးပါသည်။
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ mode ကို Enable လုပ်ထားပါ။ algorithm လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဒီလက်စွဲစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့။
အသေးစိတ်: Android ပေါ်မှာပြုစုသူမုဒ်ကို enable ရန်
အတွက် Log "Settings" ကို-"» developer များသည်.
ရရှိနိုင်ပါကရွေးချယ်မှုစာရင်းထဲမှတဆင့် scroll နှင့်တွေ့ပါ "Disable လုပ်ထားဟာ့ဒ်ဝဲ overlay ကို".
ဒါကြောင့်ကိုသက်ဝင်ဖို့, slider ကိုရွှေ့။
အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, သတိပေးပျောက်ကွယ်သွားလျှင်ကြည့်ဖို့စစ်ဆေးပါ။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, ကပိတ်ပစ်နှင့်မဟုတ်တော့ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဒီလမ်းကြောင်းတော်တော်လေးရိုးရှင်းပေမယ့်တစ်ဦးတက်ကြွ developer mode ကိုအထူးသဖြင့်တစ်ဦးအစပြုသူအဘို့, အလားအလာအန္တရာယ်စရာတွေဖြစ်တယ်, ဒါအတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများကိုကျနော်တို့ကမသုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
သာမန်အသုံးပြုသူမှယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ဖော်ပြထားနည်းလမ်းများအပေါ်က။ ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒီမှာ (လမ်းကြောင်း-အခွင့်အရေးထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဖိုင်တွေကိုတစ်ခုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်) ကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်သော်လည်း, ကျွန်တော်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အချို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်သူတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။